.ခဈြသူကကွှခေဲ့တယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရငျးတဈခုကို သိခှငျ့ရှိခဲ့လို့ မထငျမှတျထားအောငျ အံ့သွဝမျးသာခဲ့တဲ့ အသေငျခြိုဆှေ. – Askstyle
.ခဈြသူကကွှခေဲ့တယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအရငျးတဈခုကို သိခှငျ့ရှိခဲ့လို့ မထငျမှတျထားအောငျ အံ့သွဝမျးသာခဲ့တဲ့ အသေငျခြိုဆှေ.
ချစ်သူကိုကိုက သူမကိုစပြီးကြွေခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကို မိုင်ဒေးမှာ ပြန်လည်မျှဝေလာရင်း ဗီဒီယို call နေ့တိုင်းခေါ်နေတဲ့သူ့ကို ဘယ်လိုတောင် ချစ်မှန်းမသိဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ..
အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိ ဝင်ရောက်နေရာယူထားသူကတော့ အဆိုတော်မလေး အေသငိချိုဆွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အေသင်ဟာ အဆိုဘက်တွင်သာမကဘဲ သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာပါ ထူးချွန်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသံလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေကနှစ်သက်သဘောကျတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တေးသီချင်းများသာမကဘဲ ပြန်ဆိုတေးများစွာကိုလည်း အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ လတ်တလောမှာတော့ ဂီတနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိသေးဘဲ အပင်လေးတွေရောင်းရင်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်သူလေးနဲ့အတူ နားလည်မှုရှိရှိ လက်တွဲကာ အခက်အခဲမှန်သမျှရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖြတ်ကျော်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှပေးနေပြီး မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း အေသင်ရဲ့ Facebook Story မှာ ပုံလေးတွေ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အနေဝေးပေမယ့်လည်း အချိန်တိုင်းတိုင်းလိုလိုချစ်သူနဲ့ဗီဒီယိုကောလ်ပြောနေရတာကြောင့် စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး ချစ်သူအရည်တွေပျော်ကာတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေဆင်းသွားတဲ့ပုံလေးကို ထုတ်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ခဈြသူကိုကိုက သူမကိုစပွီးကွှခေဲ့တဲ့အမှတျတရလေးကို မိုငျဒေးမှာ ပွနျလညျမြှဝလောရငျး ဗီဒီယို call နတေို့ငျးချေါနတေဲ့သူ့ကို ဘယျလိုတောငျ ခဈြမှနျးမသိဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အသေငျခြိုဆှေ..
အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးတှကေို သီဆိုတတျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲထိ ဝငျရောကျနရောယူထားသူကတော့ အဆိုတျောမလေး အသေငိခြိုဆှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
အသေငျဟာ အဆိုဘကျတှငျသာမကဘဲ သရုပျဆောငျဘကျမှာပါ ထူးခြှနျပွီး လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျက ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသံလေးကိုလညျး ပရိသတျတှကေနှဈသကျသဘောကတြာကွောငျ့ ကိုယျပိုငျသံစဉျတေးသီခငျြးမြားသာမကဘဲ ပွနျဆိုတေးမြားစှာကိုလညျး အားပေးနားဆငျခဲ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ လတျတလောမှာတော့ ဂီတနဲ့ပတျသတျပွီး လှုပျရှားမှုမရှိသေးဘဲ အပငျလေးတှရေောငျးရငျး ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးကို လုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခဈြသူလေးနဲ့အတူ နားလညျမှုရှိရှိ လကျတှဲကာ အခကျအခဲမှနျသမြှရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖွတျကြျောနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုတှတေိုငျးကိုလညျး ပရိသတျတှကေို ဝမြှေပေးနပွေီး မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး အသေငျရဲ့ Facebook Story မှာ ပုံလေးတှေ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ အနဝေေးပမေယျ့လညျး အခြိနျတိုငျးတိုငျးလိုလိုခဈြသူနဲ့ဗီဒီယိုကောလျပွောနရေတာကွောငျ့ စိတျခမျြးသာပြျောရှငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ပုံကိုကွညျ့ပွီး ခဈြသူအရညျတှပြေျောကာတဖွုတျဖွုတျကွှဆေငျးသှားတဲ့ပုံလေးကို ထုတျပွလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှလေညျး သိရှိနိုငျစရေနျအတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။